1. अनुहारको वजन कसरी कम गर्ने यो हाम्रो अनुहार पातलो र आकार हेर्नका साथै हृदयको ढोका ढोका छ जसले तपाईंको वरिपरि भएकाहरूलाई तपाईं आफ्नो हेरचाह गर्नुहुन्छ भनेर देखाउन महत्वपूर्ण छ। यति धेरै व्यक्तिहरूले अनुहारको तौल गुमाउने उपाय खोज्छन् जुन काम गर्दछ। तर तब सम्म!?! सुगन्धित अनुहार, गोलो अनुहार, मोटा गाल, घाँटी घुम्न हामीसँग लामो समय सम्म रहनेछ। महिलाको लागि चिन्ताको कारण नभएसम्म जो अनुहारको वजन केही हदसम्म हराउन चाहन्छ तर आज म तपाईंलाई भन्न सक्छु हामी केवल कसरी थाहा छ कि तौल अनुहार कसरी कम गर्ने (वजन कसरी अ lose्गाल्ने) जुन हामी आज ल्याउँछौं। तपाईंको अनुहार पातलो हुनेछ जब सम्म तपाईं आफैले याद गर्न सक्नुहुन्छ
2. साधारण कार्बोहाइड्रेटको खपतलाई कम गर्नुहोस् जस्तै सेतो चामल, परिष्कृत चिनी, स्नैक्स, आइसक्रिम, आदि, साथै प्रशोधन गरिएको खाना। जसले सोडियमको उच्च दर समावेश गर्दछ दुबै शरीर र अनुहारमा edema पैदा गर्दै वा जसले कम कार्ब (लो-कार्बस डाइट) खाएर अनुहारको तौल गुमाउने छ उसले उच्च-कार्ब फूडहरू सीमित गर्नु हो। र लगातार १ 14 दिनको लागि कम-कार्ब डाईटमा परिणत गर्नुहोस्, हामी अनुहारको तौल घटाउने परिणाम अझ स्पष्टसँग हेर्न थाल्नेछौं।
3. शरीरका सबै भागहरू व्यायाम गर्नुहोस् अनुहारको वजन कम गर्नका लागि औंठाको नियम तपाईको अनुहारमा बढी बोसो विघटन गर्नु हो। जुन हामी अनुहारको वजन कम गर्न सक्छौं क्रियाकलापहरूको माध्यमबाट जसले अत्यधिक फ्याटबाट उर्जा प्राप्त गर्दछ १ exercise मिनेट पछि निरन्तर व्यायामको साथ प्रति मिनेट १-1०-१50० बीट्सको मुटुको दरमा, यसले शरीरको अतिरिक्त बोसो र गालहरूलाई अझ प्रभावकारी रूपमा जलाउन मद्दत गर्दछ। साधारण कार्बोहाइड्रेटको उपभोगको साथ संयोजनको रूपमा करीव consec० लगातार दिनहरू हुँदा। यसले हामीलाई अनुहारको तौललाई प्रभावी ढ lose्गले हराउन मद्दत गर्दछ।
4. फेस फ्याट जलिरहेको गाल फ्याटको लागि योग यो अनुहारको वजन कम गर्न को लागी एक धेरै सजिलो तरीका हो। हामी केवल मुख, डिक्स, गाला र ओठ गर्दछौं। त्यसपछि आफ्नो टाउको पछाडि झुकाउनुहोस्। घाँटी र ठोडीलाई तन्काएर, १० मिनेट, दैनिक १ at पटक, बिहान र सुत्ने अघि 30० दिनसम्म लगातार गरेर हेर्नुभयो भने अनुहारको वजनलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा कम गर्न मद्दत गर्दछ।
5. फर्मि massage मसाज अनुहारको वजन कम गर्न यो तरिका। हामी केवल क्रीम बिहान र सुत्ने बेलाको साथ अनुहारको मालिश प्रविधि प्रयोग गर्छौं। केवल क्रीम लागू गर्नुहोस् अनुहारमा important महत्त्वपूर्ण बिन्दुहरू निधार, गाला, नाक, चिन र त्यसपछि दुबै औंठो ठाडोमा प्रयोग गर्नुहोस्। दुवै तिर मन्दिरहरू देखाउनुहोस् र अवस्थित गर्नुहोस्। त्यसपछि बिस्तारै तपाइँको थम्ब प्रयोग गर्नुहोस् यसलाई भि-आकारमा घुमाउनुहोस्। त्यसपछि, गालामा पुग्दा, यो निधार सम्म बढी मालिश। त्यसपछि बिस्तारै तपाइँको थम्ब प्रयोग गर्नुहोस् कपालमा मालिश गर्नुहोस्। यो विधि एक प्रविधि हो कि हामीलाई गालाहरू तताउन आवश्यक छ। गालका मांसपेशीहरू कडा पार्न र अनुहारको वजनलाई कम गर्न मद्दत गर्न।
6. अनुहारको वजन कसरी कम गर्ने, हामी आज ल्याउँछौं। यो गाह्रो छैन, हैन? जो कोहीसँग अन्य महान तरिकाहरू छन्, कानाफूसी गर्न र एक अर्कालाई पनि भन्न नभुल्नुहोस्। हम्म !! किनकि हामी अनुहारको वजन सँगै गुमाउनेछौं ^^ hehe ^^